Facebook See Conversion / ဖောင့်ပြောင်းကြည့်ပါ ဇွတ်ဖော်နည်း ( ၃ ) နည်း – Unicode Today
Facebook See Conversion / ဖောင့်ပြောင်းကြည့်ပါ ဇွတ်ဖော်နည်း ( ၃ ) နည်း
19 ဒီဇင်ဘာ 2016
မြန်မာစာ ယူနီကုဒ်စနစ်ကို စတင်အသုံးပြုသူများ အနေဖြင့် facebook တွင်ဇော်ဂျီဖြင့် ရေးသားထားသော စာများကို မှန်ကန်စွာ ဖတ်ရှုနိုင်ရန် အတွတ် converter အသုံးပြုနိုင်သလို converter အသုံးမပြုဘဲ Facebook See Conversion (သို့မဟုတ်) ဖောင့်ပြောင်းကြည့်ပါ စာတန်းလေးပေါ်နိုပ်လိုက်ရုံဖြင့် ဇော်ဂျီဖြင့် ရေးသားထားသော စာများကို မှန်ကန်စွာ ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။လတ်တလောတွင် Facebook See Conversion / ဖောင့်ပြောင်းကြည့်ပါ ဇွတ်ဖော်နည်း ( ၃ ) နည်းရှိပါသည်။
Facebook See Conversion (သို့မဟုတ်) ဖောင့်ပြောင်းကြည့်ပါ ဇွတ်ဖော်နည်းလမ်း ( ၁ )
ဒီနည်းကတော့ ဖုန်းမှာတင်ပြုလုပ်နိုင်သလို ကွန်ပျူတာပေါ်မှာလည်း ပြုလုပ်နိုင်တဲ့ နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ကုဒ်တွေကို ကူးယူရတာဖြစ်လို့ copy and paste လုပ်တဲ့နေရာမှာ တိတိကျကျ လုပ်ဆောင်ရပါမယ်။
1.အရင်ဆုံးhttps://touch.facebook.com/ ကို Browser မှာဖွင့်ပြီး login လုပ်ပါ။
2. https://touch.facebook.com/settings… ကိုနိုပ်၍ new tabသွားပါ။(သို့)https://touch.facebook.com/settings/language/primary_dialect/?primarydialect=en_XX ကိုကူးယူ၍ new tabသွားပါ။(ဒီက copy ကူးဖို့ အဆင်မပြေရင် http://pastebin.com/9zsws2wY ကိုဖွင့်ကူးပါ။)
5. Facebook app မှာ logout လုပ်ပါ login ပြန်လုပ်ပါ။
6. ဆုတောင်းပါ 😛 See Conversion ရပါပြီ။
နည်းလမ်းမျှဝေပေးပါသော ကိုThant Thet နှင့် video မူရင်းတင်သူအား Credit ပေးပါသည်။
Facebook See Conversion (သို့မဟုတ်) ဖောင့်ပြောင်းကြည့်ပါ ဇွတ်ဖော်နည်းလမ်း ( ၂ )
ဒီနည်းလမ်းကတော့ ကွန်ပျုတာ ပေါ်ကနေသာ ပြုလုပ်လို့ ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
See Conversion အလိုမတူပဲ ဖေါ်နည်း နောက်တစ်မျိုးပါ။ကွန်ပြူတာတော့ လိုပါတယ်။Inspect tool ပေါ်လာဖို့က လွတ်တဲ့နေရာမှာ ညာကလစ်နိပ်ပြီး inspect ဆိုရင် ရပါပြီ။ Shortcut ကတော့ ctr+shift+C ပါ။လုပ်သွားတာကတော့ ကြိုက်တဲ့ ဘာသာစကား ကိုရွေးပြီး အဲ့သာသာစကားရဲ့ ကုဒ်နေရာမှာ my_MM ထဲ့ပြီး သိမ်းလိုက်တာပါ။
နည်းလမ်းနှင့် video မျှဝေပေးပါသော ကိုThix Pin အား credit ပေးပါတယ်။
Facebook See Conversion (သို့မဟုတ်) ဖောင့်ပြောင်းကြည့်ပါ ဇွတ်ဖော်နည်းလမ်း ( ၃ )
ဒီနည်းလမ်းကတော့ ကွန်ပျူတာ မလိုအပ်ဘဲ ဖုန်းမှာတင် ပြုလုပ်ရမှာ ဖြစ်တဲ့အတွတ် လူတိုင်းလွယ်ကူစွာ လုပ်ဆောင်နိုင် မှာဖြစ်ပါတယ်။
ပထမဆုံး အောက်က app လေးကို ဒေါင်းပါ။Direct link နဲ့ Google play store link နှစ်ခုတင်ပေး လိုက်ပါတယ်။ကြိုက်နှစ်သက်ရာ လင့်မှဒေါင်းပါ။
Web Inspector ရယူရန် ( Pcloud link )
Web Inspector ရယူရန် ( Google play store link )
ဖွင့်ပြီးရင် အနီနဲ့ဝိုင်းထားတဲ့ နေရာလေးကို တစ်ချက်နှိပ်ပါ။
ပြီးရင်ပေါ်လာတဲ့ အကွက်ထဲမှာ touch.facebook.com ကိုသွားပါ။
ပြီးရင် facebook အကောင့်ဝင်ပါ။
facebook အကောင့်ဝင်ပြီ:ရင် fb menu > Account Setting > Laguage ထိဝင်လိုက်ပါ။အဲ့မှာ translate language က English ဖြစ်နေပါတယ်။(အပေါ်ကပုံလိုတွေ့ရပါမယ်)အဲ့အနီဝိုင်းထားတဲ့ နေရာကိုဆက်ဝင်လိုက်ပါ။
ပြီးရင် ညာဘက် အပေါ်ထောင့်က အစက်ကလေး သုံးစက်ကိုနှိပ်ပါ။(အပေါ်ကပုံတွင်ကြည့်ပါ)
Touch Inspector ကိုရွေးပါ။(Inspector ကိုဖွင့်လိုက်ပါပြီ)
အပေါ်ကပုံလို မြင်ရရင် အနီနဲ့ဝိုင်းထားတဲ့ PARENT ကိုနှိပ်ပါ။
အပေါ်ကပုံလိုဖြစ်သွားရင်အနီနဲ့ဝိုင်းထားတဲ့ English နဲ့ en_XX ဆိုတဲ့နေရာမှာ Burmese နဲ့ my_MM လို့ရေးပါမယ်။
#English နေရာတွင် Burmese နှင့် en_XX နေရာတွင် my_MM လို့သာပြင်ရမည်ဖြစ်ပြီး တခြားမည့်သည်ကိုမျှမပြင်ရ။
အပေါ်ကပုံလို ဖြစ်သွားပါမယ်။ပြီ:ရင် save ကိုနှိပ်ပါ။
နောက်တစ်ခါ စောနက အပေါ်က အဆင့်လို ထပ်ကျလာပါမယ်။အပေါ်ကလိုဘဲ PARENT > ပြင် > Save လုပ်ပါ။
Save လည်းပြီးရော စောနက English ဆိုတဲ့နေရာမှာ Burmese ဖြစ်သွားပါပြီ။ဝမ်းသာအားရနဲ့ save ကိုမနှိပ်ပါနဲ့ဦး။Inspector ဝင်ထားတာမို့ နှိပ်သမျှ code တွေထွက်နေမှာမလို့ပါ။
စောနကလို Touch Inspector ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ။Inspector ကိုပြန်ပိတ်လိုက်ပါပြီ။(အပေါ်ကပုံလို) ပီ:မှ save ကိုနှိပ်ပါ။
See Conversation ဆိုတာကြီ:က ပေါ်လာပါပြီ။
နည်းလမ်းမျှဝေပေးသော ကို ဆက် ကြီး နှင့် video တင်ပေးတဲ့ Aung Pyae Sone တို့အား credit ပေးပါတယ်။
This Month: 41373